हाम्रो झन्डा कति पुरानो ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
हाम्रो झन्डा कति पुरानो ?
२४ चैत्र २०७४ २० मिनेट पाठ
अर्जुन ज्ञवाली / पेशलकुमार निरौला
संसारभरि नै एकमात्र त्रिकोणात्मक झन्डा नेपालको छ । यो सनातन धर्म–संस्कृति एवं योग दर्शनमा आधारित छ । यसले नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने सन्देश दिएको छ । यसैले यो स्वतन्त्रताको प्रतीक एवं पर्याय हो । प्राचीन कालदेखि नै यो झन्डाको अस्तित्व रहेको पाइन्छ । लिच्छविकालमा बनेका मन्दिरका द्वारमा यस झन्डाले स्थान पाएको छ।
सिंह राजसंस्थाको प्रतीक र झन्डा जनताको सामूहिक भावना र सार्वभौमिकताको प्रतीक हो । राजसंस्था विधिविधानको अधिनमा रहनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । यसरी नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको अभ्यास लिच्छविकालदेखि नै रहेको पाइन्छ । लिच्छविहरू वैदिक मूल्य–मान्यताका अनुयायी भएको हुँदा यो झन्डा वैदिक मान्यताको उपज हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । सायद यति पुरानो झन्डा अहिले कुनै पनि राष्ट्रको नहोला
हाम्रो परम्परा, इतिहास, संस्कृति र ज्ञानका आधारमा विद्वान् हरिनन्दन ठाकुरले ‘नेपाल देश और संस्कृति’ पुस्तकमा यस झन्डाको विषय उठान गरेका छन् । ठाकुर लेख्छन्, ‘नेपालको मौलिक विशिष्टता र पौराणिक महŒव अनुरूप नै त्यसको राष्ट्रध्वज पनि अनौठो छ,’ (२०२६, पृ. ४) । उनले नेपालको राष्ट्रध्वजमा चन्द्र र सूर्य, दुवैका चिह्न सँगसँगै अंकित भएको र चन्द्रमाको चिह्न माथिल्लो भागमा रहेको एवं सूर्य तल्लो भागमा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार, वैदिक प्रतीक–विद्या अनुसार चन्द्रमा ब्रह्मतंखव (ज्ञान) को परिचायक हो र सूर्य क्षत्रतंखव अथवा ओजस् (इनर्जी)को परिचायक हो।
वाइजे कृष्णमूर्तिले ‘राजा महेन्द्र’ नामक ग्रन्थमा राष्ट्रध्वजाको त्रिकोणलाई नैतिक तीव्रताको प्रतीक मानेका छन् । साधारण दृष्टिमा त्रिकोण त्रिशक्ति (ज्ञान–इच्छा–क्रिया)को संकेत हो । डा. जनार्दन मिश्रद्वारा लिखित भारतीय ‘प्रतीक विद्या’ नामक ग्रन्थ अनुसार यसको नाम चित्तानन्द हो । वास्तवमा त्रिकोण चिदानन्दको आदि र सबैभन्दा सरल प्रतीक हो । श्रीतन्त्रालोकमा ‘त्रिकोणे देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः’ भनी त्रिकोणमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सबै देवता रहेको उल्लेख गरिएको ठाकुरको पुस्तकमा उल्लेख छ (पृ. ४)।
कुमार प्रधानले बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’लाई आधार मानेका छन् । आचार्यले त्यस पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘राजाका निमित्त राजदरबार सिंहासन रहनु अनिवार्य हुनाले गोर्खाको राजसिंहासन यसै राजदरबार (वसन्तपुर)मा ल्याएर राखियो र यस मितिदेखि नेपाल अधिराज्यको राजधानी काठमाडौं सहर बनेर आएको छ । राजाका साथ रहने अनिवार्य वस्तुहरूमा सेतो चमर, सेतो छाता (मैन कपडाको) र राजध्वज हुन्छन्।
लिच्छविकालमा तामाका विभिन्न किसिमका निकै टकहरू पाइएका छन् । तिनमा ‘श्रीमानांक’ अंकित टक पनि एक हो । विभिन्न साइजका ‘श्रीमानांक’ मुद्रा अरुभन्दा केही बढी मात्रामा प्राप्त भएका छन् । तिनमा ध्वजासहित सिंहको मूर्ति अंकित (श्रीमानांक) मुद्रा विशेष उल्लेखनीय छ।
पश्चिम चिन्तन प्रणालीमा धन–सम्पत्ति र राजनीतिक शक्तिलाई मूल शक्ति मान्दछन् । सीमित रूपमा मात्र ज्ञान ठूलो हो भन्ने बहस छ । त्यसका समर्थकको भनाइमा ज्ञानीले धन–सम्पत्ति र राजनीति हत्याउन सक्छ भन्छन्।
तर, विवादचाहिँ यथावत छ । नेपाली सन्दर्भमा भने शक्तिभन्दा ज्ञानलाई माथि राखिएको छ । अर्थात्, ज्ञान नै ठूलो हो भन्ने विवाद छैन ।शक्ति र शक्तिको प्रयोगबाट प्राप्त परिणाम नै न्याय हो भन्ने अवधारणाको जग हिब्रु सभ्यतामा निर्माण भयो । र, हिंसाको यस्तो जगमा उभिएको शासन र न्यायको अवधारणा नै पछिल्लो समय अरब र पश्चिमी मुलुकमा फैलियो भनी युवराज संग्रौलाले ‘निःसंकोच अभिव्यक्ति’मा लेखेका छन् (२०७४, पृ. ३१)।
(ज्ञवाली र निरौलाको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘गोरक्ष पद्धति’मा संग्रहित आलेखको सम्पादित अंश । सं.)
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ ०७:५५ शनिबार
हाम्रो झन्डा कति पुरानो